पत्रपत्रिकाबाट— टोेले गुन्डा : राजधानीको नयाँ सुरक्षा चुनौती
काठमाडौँ । उपत्यकामा डिएसपीदेखि एआइजीसम्मका प्रहरी अधिकारीहरू फेरिएका छन् । नयाँ कार्यालयमा सरुवा भएलगत्तै नयाँ काम गरेर चर्चा कमाउन खोज्ने प्रवृत्ति प्रहरीमा नयाँ होइन । अझ काठमाडौंमा सरुवा हुने प्रहरीहरू काम देखाउने दबाबमा हुन्छन् । चर्चाका लागि प्रहरीको सहज काम गुन्डालाई पक्राउ गर्ने हुन थालेको छ । गुन्डागर्दी नियन्त्रणका लागि पक्राउ गरेको भन्दै चर्चा कमाइने र काम पनि देखिने भएकाले प्रहरीमा यस्तो प्रवृत्ति सुरु भएको हो ।
गतसाता काठमाडौं परिसरमा आएका एसएसपी रवीन्द्र धानुकले पनि गुन्डा पक्राउ गर्ने कार्यलाई आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् । उनले एक सातामा दुई गुन्डा नाइकेलाई पक्राउ गरे । राजधानीका पुराना गुन्डा नाइके चक्रे मिलन (मिलन गुरुङ) र साजन महर्जनलाई पक्राउ गरेका छन् । दुवैलाई शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्‍याएको आरोपमा सार्वजनिक मुद्दामा कारबाही अघि बढाइएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि शान्ति सुरक्षामा असर पुर्‍याउन सक्ने भन्दै उनीहरूलाई काठमाडौं प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । तर, एक साताभन्दा थुन्न सकेन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले २ सय रुपैयाँ धरौटीमा नै उनीहरूलाई छाडिदिएको थियो । अहिले पनि त्यस्तै हुने निश्चित छ ।
प्रहरी चर्चाको पछाडि दौडिएर रमाउँदा राजधानीमा गुन्डागर्दीबाट सर्वसाधारणलाई दुःख दिएका घटना भने छायामा परेका छन् । प्रहरी आक्रामक बनेपछि ठूला गुन्डा सुध्रँदै गए पनि टोलटोलमा नयाँ समूह जन्मिएका छन् । त्यस्ता समूहलाई सुधार्न प्रहरीले ध्यान दिन सकेको छैन । त्यही समूह राजधानीमा सुरक्षाको प्रमुख चुनौती बनेका छन् । प्रहरी भने पुराना गुन्डाहरूमै भुलिरहेको छ ।
एजेन्टहरूको विवादमा हत्या
समीरमान सिंह बस्नेत बाफल क्षेत्रका गुन्डा नाइकेका रूपमा चिनिन्छन् । उनले यसअघि कुमार घैँटे समूहमा रहेर गुन्डागर्दी गर्दै आएका थिए । दुई वर्षअघि घैँटे प्रहरीसँगको ‘इन्काउन्टर’मा मारिएपछि भूमिगत रहेका उनले भारतमा बसेर मनोज पुनको समूहसँग मिलेर आपराधिक गिरोह चलाइरहेका छन् । बस्नेत भूमिगत भएपछि पनि उनको एरियामा गुन्डागर्दी कायमै छ । विगतमा उनका सहयोगीका रूपमा काम गर्दै आएका व्यक्तिहरूले उक्त क्षेत्रमा अहिले पनि गुन्डागर्दी गर्दै आएका छन् । त्यहीक्रममा गत शुक्रबार एउटै समूहबीच झगडा हुँदा एकजनाको मृत्यु भयो भने अन्य पाँचजना घाइते भएका छन् ।
ताहाचलस्थित वैदेशिक रोजगार कार्यालको छेउमा बिमाको एजेन्सी तथा फोटोकपीसम्बन्धी पसल राख्ने विवादमा बाफलका राजु श्रेष्ठको हत्या भएको हो । राजधानीमा गुन्डागर्दीको अवस्था अझै कति जटिल छ भन्ने कुरा यो घटनाले बाहिर ल्याएको छ ।
ताहाचलको वैदेशिक रोजगार कार्यालयमा श्रम भर्न जानेहरूका लागि बिमा गर्ने तथा फर्म भर्ने पसल सञ्चालन गर्ने तयारीमा थिए श्रेष्ठ । जुन कुरा पहिलेदेखि पसल चलाउँदै आएका उनका साथी गोरे भन्ने सागर सुवेदीलाई मन परेको थिएन । जसकारण योजनाबद्ध रूपमा भेट्न बोलाएर सुवेदीले खुकरी हानी श्रेष्ठको हत्या गरेका हुन् ।
घटनामा अन्य चारजना घाइते भएका छन् । घाइतेमध्ये विकास गुरुङ र विवेक खत्री अस्पतालमा उपचाररत छन् । अन्य दुईजना सामान्य घाइते भएका छन् । ताहाचलमा बिमाको एजेन्टका रूपमा काम गर्ने सागर सुवेदी ‘खैरे’को समूहले श्रेष्ठको हत्या गरेको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी रामदत्त जोशी बताउँछन् । सुवेदी र उनका समूहका राम दर्जी र लक्ष्मण दर्जीविरुद्ध मृतकका परिवारले प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएका छन् । हत्यापछि उनीहरू फरार छन् ।
सुवेदी र श्रेष्ठ साथी हुन् । तर, पसल राख्ने विषयमा उनीहरूबीच केही हप्तायता नै झगडा सुरु भएको थियो । गत शुक्रबार सा“झ सुवेदीले अब मिलेर काम गर्ने भन्दै सल्लाह गर्न सोल्टी होटेल पछाडिको सडकमा श्रेष्ठलाई बोलाए । श्रेष्ठ आफ्ना साथीसहित मोटरसाइकलमा गए । सुरुमा उनीहरूबीच सामान्य धक्काधक्की भयो । सुवेदीको समूहको योजना आक्रमण नै गर्ने थियो । खुकुरी नै बोकेर गएका थिए । जसकारण उनीहरूले झगडा बढाउँदै लगे । विवाद चलिरहेकै वेला उनीहरूले खुकुरी निकालेर आक्रमण गरी भागे । श्रेष्ठलाई टाउकोमा गम्भीर चोट लाग्यो । उपचारका क्रममा शनिबार बिहान उनको मृत्यु भयो ।
यो घटनामा ताहाचलमा हुने दलाली प्रमुख कारण भएको डिएसपी नवराज अधिकारी बताउँछन् । वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलमा दैनिक वैदेशिक रोजगारीमा जाने करिब ५ सय युवाहरू श्रम स्वीकृतिका लागि जान्छन् । त्यसका लागि अनिवार्य रूपमा जीवनबिमा गरेर आवश्यक कागजपत्रसहित फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ । बिमा गराउन र फर्म भर्न वैदेशिक रोजगार कार्यालयवरपर एक सयभन्दा धेरै पसलहरू सञ्चालित छन् । उनीहरूले चर्काे शुल्क असुल्ने गर्दछन् । पसल चलाउनेमध्ये कतिपय गुन्डागर्दीमा संलग्न रहेको कालिमाटी वृत्तका एक अधिकारीले बताए । पसलहरूले फर्म भर्ने नाममा चर्काे शुल्क असुल्ने गर्छन् । छेउमा अर्काे पसल खुल्दा आफ्नो कमाइ गुम्ने डरले सुवेदी हत्यामा उत्रिएका थिए ।
डान्सबार सञ्चालकको औँला छिन्यो
गत वैशाखमा मैतीदेवीको एक डान्सबारमा खुकुरी प्रहार भयो । डान्सबारका सञ्चालक काभ्रेका सत्य लामाको औँला छिन्यो । भर्खरै गुन्डागर्दी सुरु गरेको एक समूहले उनीमाथि आक्रमण गरेको थियो । झापा का“कडभिट्टाका लाप्साङ लामा, संगम लामा र नवराज खड्काले खुकरीले आक्रमण गरेका थिए । लाप्साङ र नवराज पक्राउ परेका छन् भने संगम फरार छन् । उनीहरूले मैतीदेवी क्षेत्रमा गुन्डागर्दी सुरु गरेका थिए । घटनाको चार महिनापछि बल्लतल्ल उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ ग¥यो । अदालतले गत साता पुर्पक्षका लागि जेल चलानको आदेश दिएको छ । लाप्साङ मैतीदेवीमा धेरैलाई दुःख दिँदै आएका थिए । यस्ता घटना टोलटोलमा हुने गरेका छन् ।
गत फागुनमा जावलाखेलमा कन्सर्ट भइरहेको थियो । नाच्नेक्रममा दुई समूहबीच विवाद भयो । एक समूह गुन्डागर्दीमा संलग्नहरू थिए । उनीहरूले चक्कुले आक्रमण गरिहाले । घटनामा मिलन तामाङ घाइते भए । चक्कु प्रहार गर्ने रोहित थापा र रमन श्रेष्ठलाई प्रहरीले पक्राउ गरी ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा कारबाही गर्‍यो । सोही समूहका अनुज लामा, सिजन लामा, आयुष थापा, सागर भण्डारी, अजय कोमर्चा, अर्जुन विक, सुशन खड्का, सिर्जन रानामगर, सञ्जय लामा (तामाङ), विश्वास लुंगेली मगर, अमन तामाङलाई पनि पक्राउ गरी सार्वजनिक अपराध मुद्दामा कारबाही गर्‍यो । लागुऔषध सेवन गर्ने, स्थानीयलाई धम्काएर असुल्ने र फाइट गर्ने समूहहरू राजधानीमा बढ्दै छ । अहिले टोलटोलमा त्यस्ता समूह बढ्दै छन् । त्यो समूहलाई अहिलेदेखि नै सुधार्न नसकेपछि पछि उनीहरूले सुरक्षामा ठूलो चुनौती दिन सक्ने जोखिम छ ।
पार्किङ र ठेक्कापट्टाले बढायो गुन्डागर्दी
ट्राफिक महाशाखामा सरुवा भएलगत्तै डिआइजी सर्वेन्द्र खनालले पार्किङमा गुन्डागर्दी गर्नेलाई कारबाहीको चेतावनी दिए । उनको भनाइले पनि पार्किङमा गुन्डागर्दीमा संलग्न व्यक्तिहरूको कति राज छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । हुन त महानगरले धेरै ठाउँमा पार्किङ निःशुल्क गरेको छ । तर, विमानस्थल, यातायात कार्यालयका छेउछाउमा महँगो शुल्कमा पार्किङहरू सञ्चालन गरिएका छन् । जसमा गुन्डागर्दीमा आबद्ध व्यक्तिहरूको हालिमुहाली रहेको प्रहरीको विश्लेषण छ ।
त्यस्तै सरकारी ठेक्कापट्टाले पनि गुन्डागर्दी बढाएको छ । यो समस्या उपत्यकाभन्दा बाहिरी जिल्लामा धेरै छ । गुन्डागर्दीमार्फत आफ्नो समूहबाहेक अरूलाई टेन्डर डकुमेन्ट नै बुझाउन नदिने गरिन्छ । धेरैजसो गुन्डागर्दीमा संलग्नहरू ठेक्कापट्टा पनि संलग्न छन् । ठेकदारहरूले पनि गुन्डागर्दीमा संलग्नहरूलाई पाल्दै आएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । त्यही पैसामा लोभिएर राम्रो बाटो छाडेर गुन्डागर्दीको समूहमा लाग्ने गर्दछन् ।
हरेक टोल गुन्डारहित बनाउँछौँ
काठमाडौंमा गुन्डा पक्राउ अभियान चलेको छ, तर अपराध नियन्त्रणभन्दा चर्चा र तर्साउनका लागि पक्राउ गर्ने गरेको आरोप लाग्छ नि ?
चर्चाका लागि होइन । हामीले असल नियत राखेर गुन्डागर्दी नियन्त्रणकै लागि पक्रन थालेका हौँ । गुन्डागर्दी नियन्त्रणलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ । गुन्डाविरुद्ध सर्वसाधारणले ढुक्कले उजुरी गर्न सक्ने वातावरण बनाउनेछौँ ।
ठूला गुन्डाभन्दा ‘टोले गुन्डा’ले दुःख दिएको गुनासो सुनिन्छ नि ?
हामी सबै किसिमका गुन्डालाई तह लगाउँछौँ । मैले ब्रिफिङमा पनि ‘क्लिनिङ फ्रम द टोल’ भनेको छु । खासमा गुन्डाहरूको पहिलोपटक लिस्ट बनाउने मान्छे मै हुँ । अपराध महाशाखामा हुँदा पहिलोपटक लिस्ट बनाएर मैले नै कारबाही सुरु गरेको थिएँ । अहिले पनि चक्रे र साजन महर्जन पक्राउ परिसकेका छन् । सबै किसिमका गुन्डागर्दी नियन्त्रण गरिन्छ ।
अरू के छन् नयाँ योजना ?
अपराध घटाउने नै मेरो प्रमुख उद्देश्य छ । म काठमाडौं परिसरमा हु“दा ५३ प्रतिशत अपराध घटाएको थिएँ । दोस्रो एजेन्डा गुन्डागर्दी नियन्त्रण गर्नु नै हो । तेस्रोमा चोरी, लुटपाटजस्ता अपराध न्यूनीकरण छ । प्रहरीको आचरण र व्यवहारमा सम्झौता हु“दैन । तपाईं अब प्रहरी कार्यालयमा कसैलाई भेट्न जानुभएको छ भने गेटमा रहेको प्रहरीले सम्बन्धित व्यक्तिकैमा पुर्‍याइदिन्छ । जनमैत्री प्रहरी बनाउने हो । त्यसका लागि बस्ती भेटघाट कार्यक्रम सुरु गर्न निर्देशन दिइसकेको छु । काठमाडौं अन्तर्राष्ट्रिय सहर भएकाले प्रहरीले त्यहीअनुसार सुरक्षा योजना बनाएर लागू गर्नेछ । यसका साथै खाद्यान्न र स्वास्थ्यमा ठगी नियन्त्रण पनि प्राथमिकतामा छन् ।
उपत्यकाका खास सुरक्षा चुनौती के हुन् ?
अपराधले सहर विषाक्त छ । चोरी, लुटपाट, ठगी र लागुऔषधजस्ता अपराधले सहरमा विकृति बढेको छ । यी विकृति अब हटाइनेछ । — नवराज मैनाली, नयाँं पत्रिका दैनिक, १६ भदौ